Gabar caan ku noqotay lagdin ay kaga adkaatay wiilal - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Gabar caan ku noqotay lagdin ay kaga adkaatay wiilal
February 22, 2021 at 10:36 Gabar caan ku noqotay lagdin ay kaga adkaatay wiilal2021-02-22T10:36:12+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
6 Daqiiqadood ka hor
Divya Kakran oo ah gabar u dhalatay dalka Hindiya ayaa caan ka noqotay dalkaas iyo meela badan oo caalamka kadib markii ay lagdin kaga adkaatay wiilal badan oo uu tartan dhexmaray.
Divya oo yaraanteedii diiday inay waxbarato ayaa waalidkeeda waxay geeyeen goob lagu barto lagdinta, halkaa soo ay ka barataya ciyaarta lagdinta oo sahashay inay heer ka gaarto, kuna guuleysato billado badan.
Divya oo heysata abaalmarino kala duwan ayaa sidoo kale ku guuleysatay abaalmarinta qallinka ee ciyaaraha Aasiya iyo kuwa dalalka barwaaqa sooranka.
“Weligay ma aanan jecleyn in aan iskoolka aado oo aan waxbarto, waan ooyi jiray, kadib hooyaday waxay go’aansatay inay i geyso meel lagu barto lagdinta, waxaan bartay lagdinta oo waxaan la lagdami jiray gabdhaha balse dadku ma aysan xiiseyn jirin ilaa markii dambe aan lagdin la galay wiilasha oo aan ka adkaaday. Kuwa badan ayay xiisa u yeesheen qofka aan ahay”, ayay tiri Divya Kakran.
Divya ayaa sheegtay in ayadoo sideed sano jir ah ay lagdinta kaga adkaatay wiil, ayna xilligaa ku guuleysatay lacag dhan 41 dollar.
Xirfadan ayaa waxay sheegtay in ayada iyo walaalkeed ay barteen balse waalidkooda ay awoodi kari waayeen inay labaduba ka bixiyaan iskoolka lagdinta ay ku baran lahaayeen.
“Aabahay markii uu arkay hammiga aan u hayo ciyaaraha, wuu igu taageeray, walalkeyna anniga ayuu ii dhaafay, si aan horumar uga gaaro”.
Gabadhan yar ee kasoo jeeda reer sabool ah ayaan ka adkaan wiilasha oo keliya, balse sidoo kale waxay meesha ka saartay dhaqanka ay aaminsan yihiin bulshada ay kasoo jeedo oo aan aaminsaneyn in gabdhuhu ay ka qeybgeli karaan tartamadan oo kale.
“Waxay aabahay ku yirahdeen haddii aad lacag dooneyso , waan kaa caawin karnaa ee maxay tahay sababta aad gabadhaada ugu oggolaatay inay lagdanto? Isla dadkaas ayaa maanta aabahay u sheegaya sida ay ugu faraxsan yihiin horumarka aan gaaray”.
Gabadhan waxaa haatan tababr habka fogaan aragga u sameeya macallimiin jooga Yurub, kuwaas oo ka caawiya dhanka tababaraka iyo xeeladeysiga.
« Conflict along Hiran-Galmudug road affects jobs and local markets
Chelsea Oo Wadahalo La Furtay Bayern Munich, Daafac Aad Loo Qiimeeyo Ayay Ka Doonayaan. »